Real Madrid oo Gacanta Ku Dhigtay Martin Odegaard oo Kooxo Badan ay Baadi Goob Ugu Jireen “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Real Madrid oo Gacanta Ku Dhigtay Martin Odegaard oo Kooxo Badan ay Baadi Goob Ugu Jireen “SAWIRRO”
Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay saxiixa ciyaaryahan Martin Odegaard oo isha ay la raacayeen kooxo badan oo ka dhisan qaarada yurub.
Ciyaaryahan Martin Odegaard oo 16-jir ah ayaa waxa ay kooxda Real Madrid kula soo wareegtay lacag dhan £2.3million.
Ciyaaryahan Odegaard oo u dhashay dalka Norway ayaa xaqiijiyay in Zinedine Zidane uu ka dhaadhiciyay in uu ku soo biiro kooxda Real Madrid,isagoo sheegay in uu iska dhega tiray dalab uga yimid kooxo ka ciyaara horyaalka ingiriiska.
Ciyaaryahan Martin Odegaard ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta tababarka ee kooxda Real Madrid,isagoo la sawiran ciyaaryahanka ugu wanaagsan aduunka ee Cristiano Ranaldo iyo Sergio Ramos.
Ciyaaryahan Martin Odegaard ayaa lixda bilood ee ugu horeysa sanadkan qaadan doono todobaad kasta mushaar dhan £80,000,laakin mushaarkiisa rasmiga ah waxa uu noqon doonaa £40,000 todobaadkii.
Ciyaaryahan Martin Odegaard ayaa tababar la sameeyn doono kooxda koowaad ee Real Madrid iyo kooxda labaad intaba.
Ciyaaryahan Martin Odegaard oo shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in ay sharaf u tahay in uu u ciyaaro kooxda Real Madrid.